युगसम्बाद साप्ताहिक - जनचाहना समान अवसर हो, संघ शासन हैन
Wednesday, 01.29.2020, 01:45pm (GMT+5.5) Home Contact
जनचाहना समान अवसर हो, संघ शासन हैन
Tuesday, 12.20.2016, 12:05pm (GMT+5.5)
त्यसो त यहाँ गणतन्त्र नै बिना नियमको राजनीतिक खेल भएको छ, जसमा लाज घीनलाई कुनै स्थान छैन । खेलाडी नभएपछि कप्तान एक्लै लगौंटी लाएर मैदानमा उभिए पनि हुने, नहुने कुरा बोलदिए पनि हुने, नगर्ने काम गरे पनि हुने, जसरी हुन्छ जनतालाई भ्रममा पार्नसके पुग्ने– यस्तो अनौठो खेल । अघि राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनिन्थ्यो भने हिजोआज पवित्र खेल मान्न थालेका छन् राजनीतिबाजहरु । यहाँ न कप्तानलाई नियम लाग्छ, न त खेलाडीलाई नै । त्यो पनि दूरनियन्त्रित कक्षबाट संचालित हुने भएपछि त कुरै भएन । एकथरिलाई शत्रुसाधन गर्ने त अर्काथरिलाई स्वार्थसाधन गर्ने अनौठो खेल भएको छ राजनीति । जनता त्यस्तै खेलहेर्न विवश छन् । नेताको स्थिति सप्रन्छ भने जनता भर्सेलामै परुन् कसैलाई वास्ता छैन । यस्तै छ आजको स्थिति ।
धेरै ठक्कर खाएर नेपाल बुझेका वीपी कोइराला पंचायतले ल्याएको राष्ट्रिय एकताबाट प्रभावित थिए र उनी त्यसमा प्रजातन्त्र थप्न चाहन्थे । तर, दरबारिया र पंच नेता तर्सेर वर्गीय संगठनको सदस्य हुनैपर्ने शर्त तेस्र्याएपछि स्थिति विग्रेको थियो । बिचौलियाले राजा महेन्द्र र वीपीबीच मेलमिलाप हुन दिएका भए आज नेपालको अवस्था नै अर्कै हुने थियो । त्यसपछि यहाँ सरकार फेर्ने खेल बाहेक अरु केही भएन । एउटा व्यवस्था फालेर अर्को व्यवस्था ल्याउँदा पनि यहाँ स्पष्ट व्यावहारिक उद्देश्य र कार्यक्रम दिन सकेनन्, केवल अघिल्लो व्यवस्था फाल्ने धुन मात्र हुनाले अन्योल, अव्यवस्था र बेथिति बढ्दै गयो । समाजलाई अघि डो¥याउनेभन्दा पछि फर्काउने काम मात्रै भए ।
त्यस्तै देशलाई पछि धकेल्ने मात्रै होइन, देशै टुक्र्याउने खालको उद्देश्यका साथ अहिले संघीयता लाद्न खोजेका छन् । यथार्थमा संघीय शासन लागू गर्नु भनेको देशको एकता, सद्भाव र सहिष्णुतालाई खलबल्याएर टुक्रे राज्य खडा गर्नु हो । त्यस्ता टुक्रे राज्य साधन स्रोतको कमी भएर आफैं कमजोर हुन्छन्, सामूूहिक शक्ति हराउँछ । हिन्दुस्तानमा जस्तो पहिलेदेखि नै अलग भएका राज्य यहाँ छैनन् । अब फोरेर संघ राज्य बनाउने कुराको जनताले नै बिरोध गरिरहेका छन् । त्यसैले जिल्लाहरुलाई नै बढी अधिकार दिएर देशलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । संघीय राज्यका जटिलता नबुझ्नेहरु लहैलहैमा लागेका छन् । नेपालको संयुक्त रुपलाई विभाजित गरेर देशलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र विदेशी स्वार्थका कारणले भैरहेको छ । संघीयताकै कारण नाइजेरिया गृहयुद्धमा फसेको छ । बोकोहराम जस्तो संगठनले प्रतिदिन बिस्फोट र हत्याकाण्ड मच्चाइरहेको छ । त्यसबाट शिक्षा लिनुपथ्र्यो, तर खोई ?
पृथ्वीनारायण शाहले ५०–५५ वटा टुक्रे राज्य जोरेर नबनाएका भए आज नेपाल रहन्थ्यो ? नेताहरुका दिमाखमा यो तथ्य किन घुस्दैन ? जनतालाई चाहिएको अधिकार हो, समान अवसर र सुविधा हो । संघ त जनताले बुझेकै छैनन् । त्यसैले स्थानीय संस्थाहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा केही ठुटे नेताहरु विदेशीका इशारामा देश टुक्र्याउने र मिलेर बसेका जनतालाई फटाउने काम गर्दैैछन् । यो अनेकौं संघ बनाउने मूख्र्याईंले कुनबेला धोका पाइने हो भन्न सकिंदैन । केन्द्रले समाल्न नसक्ने अवस्थामा केही ठूला देशमा संघ राज्य भए पनि नेपालमा सम्भव छैन । जातीयताका नाममा संघ विभाजन भएका दुष्परिणामका अनेक उदाहरण छन् ।
भारत नै जातीयताका आधारमा टुक्रिएको हो र अझै टुक्रिदैछ । अफ्रिकी मुलुकहरु जातीय र भाषाकै झगडाले गर्दा जर्जर भएका छन् । पूर्व सोभियन संघ नै १५–१६ टुक्रा भएको देखिएकै छ । त्यस्तै युगोस्लाभिया ५–६ टुक्रा भयो । बेल्जियम भाषाका आधारमा तीन टुक्रा भएर पनि अझै अन्योल छ । आज नेपालमा पनि जातजाति, लिंग, क्षेत्र र सम्प्रदायका आधारमा स्थानीय निकायका नाममा सयौं राज्य बनाउन खोजिरहेका छन् । माओवादीले नै आठसय राज्य बनाउने भनेकै छन् । यो सबै देशलाई छिन्नभिन्न पार्ने तारतम्य हो । नेताहरुले देशको भविष्यको साँचो भारतलाई बुझाउन खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई चाणक्य र जंगबहादुरको संयुक्त भूमिका खेल्नसक्ने मान्छेको आवश्यकता छ ।
देश ठूलो कि पार्टी ? पार्टीको काम गर्ने अवधि त बढीमा पाँच वर्षको हुन्छ । देश त पाँचवर्षे होइनन् नि । यहाँका पार्टी नेताले आजलाई मात्र हेरेका छन् । तर देशका लागि त भोलिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी र उनका नेतालाई त टालटुल–ढाटढुट गरेर आफ्नो समय पूरा गर्न पाए भयो, तर देशका लागि ? खोई कसैले चिन्ता देखाएर काम गरेको छ ? यहाँ हुनुपर्ने भएकै छैन, नहुनुपर्ने मात्र भएको छ । बनावटी भाषण र झूटा आश्वासन बाहेक केही छैन । आज नागरिकता र भाषाको किचलो झिकेर संविधान संशोधनको विषय पनि बाहिरैबाट आएको छ । भारतमा झडै नौसय भाषा छन्, तर मान्यता आठ भाषाले मात्र पाएका छन् । अहिले केही आयातित नेता उठाएर भारतले हिन्दीलाई समेत संविधानका अनुसूचीमा रखाउने द्रविड प्राणायम गर्दैछ । यो हाम्रै नेताको बेइमानी पनि हो ।
नेपालमा १२५ जात र १२३ भाषा भनिएको छ । भारतमा ९ सय भाषा छन्, तर सबैलाई मान्यता छैन । नेपालमा भने यहाँ बोलिने सबैलाई मान्यता दिइएको छ । त्यति गर्दा पनि हिन्दीलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने अर्घेल्याई देखाइदैछ । यथार्थमै भन्ने हो भने आज नेपालमाा गणतन्त्रका नाममा निरंकुश शासन चलेको छ । माओवादी केन्द्र (मोदीवादी केन्द्र भने हुने हो)को मच्चयाटमा कांग्रेस र एमाले अन्धा भएर उसैका पछि लागेका छन् । नत्र गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता राष्ट्रिय महत्वका प्रश्नमा जनमत किन लिंदैनन् । जनतन्त्र–लोकतन्त्र जस्ता शब्द फलाक्ने, तर जनताको अभिमत लिन डराउने किन ? जनताले मान्दैनन् भनेर होइन ? जनताको अपमान गर्नेयस्ता लाछीले चलाएको व्यवस्था कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छ ? जनताले चाहेको व्यवस्थार्ला मात्र प्रजातन्त्र भन्न मिल्छ । नेताले लादेको व्यवस्था त तानाशाही हुन्छ, जोअहिले नेपालमा छ ।
२०६२ मंसि ७ मा भारतले दिल्लीमा बोलाएर कांग्रेस–एमाले र माओवादीबीच गराएको १२ बुँदे समझदारीमा न गणतन्त्र थियो, न त धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नै । पछि नेताहरुले बेइमानी गरेर जनतालाई धोका दिएका हुन् । जनमतभन्दा गुरिल्लाको बलमिचाई माओवादीले लेनिनकै शैलीमा लाद्दा पनि कांग्रेस–एमाले किन बोल्न सकेनन् ? संघीयताका नाममा मान्छेका समूहलाई विभिन्न जनतमा विभाजित गर्नु नै टुक्र्याउनु हो, खण्डित पार्नु हो । त्यसैले राष्ट्रको एकतालाई खण्डित हुन नदिने हो भने जातका आधारमा होइन, नेताहरुले अखण्ड नेपालका आधारमा हेर्नुपर्छ । जातको आधार त नेपालीत्व हुनुपर्छ । फूलको अस्तित्व र सौन्दर्य पूर्ण फूलमा हुन्छ, अखण्ड फूलमा हुन्छ । फूललाई टुक्र्याइयो भने सौन्दर्य मात्रै होइन, अस्तित्व समेत हराउन सक्छ भन्ने सद्बुद्धि नेताहरुमा आवस् । संघीयताको विषालु दाँत गाडिन नपाउन् । होसियार ।
अब एउटा कविता कञ्चन पुडासैनीको–
सांसदको संख्या गन्ती गर्दै जाँदा
जनताको जीउ पीरैपीरले आधा ।
कोही मन्त्रीजीको गर्छन् जयकार
कोही बसीबासी घुर्छन् घ्वार घ्वार ।